Top Software 7 Data Recovery u Mac OS X El Capitan
Sida ay wax yihiin Windows, xataa kombiyuutarada Mac aad u kharribmay waqtiyada iyo natiijada ka, ee dhamaadka users kor ku dhamaan weligiis iyo wanaag laga badiyay xogta ay muhiim. Haddii aad tahay user Windows ah, aad ku sugan tahay nasiib maadaama ay jiraan dhowr qalab kabashada macluumaadka la heli karo ee kombiyuutarada socda nidaamka qalliinka. Dhinaca kale, haddii aad isticmaalayso Mac, waxaa laga yaabaa in waxoogaa u babac dhigaya si ay u helaan software ah hufan kabashada xogta.
Qaybtani waxay halkan waa in ay ku caawiyaan sida macnaha guud.
Taasi lagu yiri, haddii ay kugu adag tahay in aad raadiso wanaagsan Mac qalab kabashada xogta iyo in ka badan in, haddii ay tahay in aad go'aansato mid ka mid ah in aad doorato haddii aad u hesho liiska codsiyada sida awoodin, halkan aad xal u heli doonaan dhibaatada.
Ka dib waxa ku qoran magacyada software kabashada 7 xogta Mac OS X El Capitan oo ay la socdaan ay sharaxaad, waxtar iyo nuqsaan, iyo URL ay dhiganta goobta rasmiga ah ee ka meesha aad kala soo bixi kartaa codsiga aad doorato:
01 - Wondershare Data Recovery (for Mac)
( URL Download : http://www.wondershare.com/data-recovery-mac/ )
Heli dhufto labada Windows iyo Mac, Wondershare Data Recovery waa tan mid ka mid ah codsiyada ugu fiican marka ay timaado inuu ka soo kabsado xogta lumay ka computer Mac ah. Barnaamijku wuxuu kuu ogolaanayaa in aad ka bogsato files tirtiray ka qoruhu musuqmaasuq ama la tirtiro. Doorashada cayriin kabashada xogta awood u kabsaday xogta xitaa marka files noqon gebi ahaanba irrecoverable.
• Wondershare Data Recovery ayaa interface fudud iyo dareen leh in aad Socon habka xogta soo kabashada ee ambiance saaxir oo kale ah.
• Kuu ogolaanayaa inaad badbaadin iyo dib u natiijada scan oo ka mid ah files recoverable.
• Waxaad ka qaadan kartaa files shaqsi inuu ka soo kabsado.
• Waxaad ku eegaan karo files qaar ka mid ah ka hor soo kabsaday.
• Barnaamijku wuxuu awood u kabsaday qoruhu si buuxda musuqmaasuq iyo xitaa tirtiray.
• software ayaa ku soo beegmay iyadoo qiimahaas ah.
02 - iSkysoft Data Recovery (for Mac)
( URL Download : http://www.iskysoft.com/data-recovery-mac/ )
Barnaamijka Tani waa lambarka labaad ka dib markii Wondershare Data Recovery. Software waxa uu leeyahay oo dhan muuqaalada in qalab wax ku ool ah ay leeyihiin waa inuu ka soo kabsado xogta lumay ka PC Mac ah. iSkysoft Data Recovery bandhigayaa fursadaha kabashada xogta laga heli karo interface leben-sida in ilaa marka aad abuurtaan codsiga yimaado a.
Waxaad riix kartaa leben kasta oo aad doorato in la bilaabo ay feature u dhiganta, in markaas barnaamijka idin Toosiya geeddi-socodka oo dhan soo kabashada xogta halkaas ka.
• design toos ah iyo interface.
• Qaab-dhismeedka saaxir-sida dareen leh.
• Waxa loo baahan yahay No xirfadaha farsamo si ay u isticmaalaan barnaamijka.
• Barnaamijka ayaa ku soo beegmay iyadoo qiimahaas ah.
03 - gaardi Disk u Mac
( URL Download : http://www.cleverfiles.com/mac-data-recovery.html )
Available in qoraalkii aasaasiga ah iyo Pro labada kuwaas oo lacag la'aan ah oo ay bixisay siday u kala horreeyaan, gaardi Disk taageertaa ma aha oo kaliya kombiyuutarada Mac OS X inuu ka soo kabsado xogta lumay ama drives, waxaa sidoo kale awood u iPads baar, qalabka shidin, iyo iPod. Qeybta ugu wanaagsan yahay, inkastoo software ma u baahan tahay tababar farsamo, fara badan oo ah Casharrada si fudud u fahmi lagu daray barnaamijka si loogu caawiyo in ay dhamaadka users ugu soo hesho.
• Kuu ogolaanayaa inaad ku eegaan files ka hor inta aadan soo kaban karto iyaga.
• Kuu ogolaanayaa inaad iskaan qalab kale oo ku xiran si aad u computer for files lumay ama la tirtiro.
• Soo la Casharrada fudud.
• interface ma aha in sahlan.
• version ayaa Pro ee software-ka waa in la iibsaday inay isticmaalaan dhammaan qaababka ay.
04 - Ma Your Data Recovery for Mac Free
( URL Download : http://www.doyourdata.com/mac-data-recovery-software/free-mac-data-recovery-software.html )
Barnaamijku wuxuu awood u kabsaday xogta in uu lumo oo sabab u ah shilalka gaari ku adag, isbedbedelka danab, hoos ama casriyeeyo nidaamka qalliinka, iwm Sida ay tahay qalab kale oo badan, Ha Your Data Recovery for Mac Free kale oo uu leeyahay feature Falanqeynta taas oo ka caawisa ah aad u hubiso waxyaabaha ku files 'ka hor inta aanad ka soo kabsado iyaga.
• In kasta oo ka mid ah iyagoo barnaamij lacag la'aan ah, Ma Your Data Recovery for Mac Free waa wax ku ool ah oo hufan.
• feature Kulanka Xiisaha waa la heli karaa.
• The feature kulanka xiisaha leh aan awood u akhriska oo dhan faylasha.
• Waxaa loo baahan yahay version ayaa Pro barnaamijka in ay isticmaalaan qaababka ay sare.
05 - Tenorshare kasta Data Recovery for Mac
( URL Download : http://www.tenorshare.com/products/data-recovery-mac.html )
Tenorshare kasta Data Recovery for Mac taageertaa inta badan qaybaha sare ee Mac OS X oo ay ku jiraan Mac OS X El capita (10.11). Barnaamijku wuxuu awood u soo ceshado files warbaahinta lumay, emails, sawiro, iwm ka drive Mac adag.
Software waxa kale oo uu awood u baadhista iyo baar kasta oo aaladaha kale ee digital in aad ku xidhan si aad u computer Mac via USB.
• Tilmaan Codsiga ayaa tallaabo-tallaabo kuu ogolaanayaa inaad si ay u qabtaan soo kabashada xogta la socdaan soo bandhigay talooyin iyo talooyin muhiim ah oo ku caawin kara inta ay socoto.
• interface ee barnaamijka waa dareen leh oo si sahlan loo fahmi.
• No files log ayaa loo abuuray, geeddi-socodka soo kabashada xogta.
• Codsiga waxaa la Timaadda tag qiimo.
06 - xiddig Phoenix Mac Data Recovery
( URL Download : http://www.stellarinfo.com/mac-osx-recovery.php )
Xiddig Phoenix Mac Data Recovery weli waa mid kale qalab kabashada xogta kombiyuutarada Mac. Barnaamijka ayaa lagu taageerayaa dhammaan qaybaha sare ee Mac OS X oo ay ku jiraan Mac OS X El Capitan. Iyadoo codsigan, waxaad si fudud u soo kaban karto, aad files warbaahinta laga badiyay, sawiro, ama waraaqo kale oo ka drives adag, qoruhu ku kharribeen ama la tirtiro, ama ka qoruhu NTFS Boot Camp burburtay gudahood.
Inkasta oo loogu Mac, barnaamijka taageertaa filesystems kala duwan waxaa lagu ogaan karaa marka qalab kasta oo dibadda ku xiran kombiyuutarka.
• Taageerada kabashada xogta cayriin ka qoruhu ku kharribeen ama la tirtiro.
• awood buuxda scan disk gaari ku adag inuu ka soo kabsado xogta lumay.
• Taageerada filesystems kala duwan oo ay ka mid yihiin HFS, exFAT, NTFS, iwm
• software waxa uu leeyahay qiimihiisa ah.
• Iyada oo nidaamka file badan oo ay taageerayaan, hanaanka soo kabashada xogta mararka qaarkood dhici karta in lagu wareerayo. Si kastaba ha ahaatee, waxaad had iyo jeer u isticmaali kartaa caawimo ah file dhisay-in si wax looga qabto walaaca.
( URL Download : https://www.prosofteng.com/datarescue4/ )
iyo sawiro ka ah Mac disk adag.
• Kuu ogolaanayaa scan qoto dheer oo disk adag taas oo faa'iido leh marka iskaanka caadiga ah ku guuldareysto in la ogaado faylasha tirtiray.
• Kuu ogolaanayaa feature Gadzhiyev oo abuuri replica ah drive aad hadda jira, ka dibna uu baaritaanku drive Gadzhiyev for files tirtiray ama laga badiyay ah. Tani waxay xaqiijineysaa in aad disk adag ugu weyn luminayo xitaa haddii wax qaldamaan inta ay socoto.
• Waxaa loo baahan yahay Times sanadlaha ah si ay u isticmaalaan barnaamij soo-celinta xogta aan xad lahayn.
Dad kala duwan ay leeyihiin baahiyo kala duwan iyo habab kala duwan si ay u oofiyo. Dhammaan qalabka kabashada xogta kor ku xusan for Mac waa ool ah in hab iyaga u gaar iyo shaqsi ahaan, waxaad ka heli kartaa software kaamil ah ka mid ah liiska ugu fiican ee ku haboon baahidaada.
Sony Vaio Data Recovery: Sidee inuu ka soo kabsado Xogta laga Laptop Sony Vaio
> Resource > Ladnaansho > Top 7 Data Recovery Software u Mac OS X El Capitan